Fitaovam-piadiana Maivana: Sary Mampihetsi-Po Avy Ao Syria · Global Voices teny Malagasy
Fitaovam-piadiana Maivana: Sary Mampihetsi-Po Avy Ao Syria
Voadika ny 19 Jolay 2013 5:54 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, فارسی, Español, عربي, polski, English
Lahatsary avy ao Syria maherin'ny 500.000 no navoaka tamin'ny aterineto nandritra izay roa taona izay. Maro tamin'izany ny lahatsary nandritra ny fihetsiketsehana sy ny ady, ny hafa kosa mampisongadina ny fijery sy ny fahitan'ireo mpiady, mpanao fihetsiketsehana, fihetsiketsehana milamina, sy ireo olom-pirenena nahita maso ny hetsika na ireo zava-nitranga. Na dia eo aza ny hamaroan'ny fijery avy amin'ireo nanatri-maso, zara raha mivoaka amin'ny fampahalalam-baovao manerantany ny ady ao Syria. Anisan'ny anton'izany ny famariparitana ara-tantara ny ady izay tsy mifanaraka tsara amin'ny tena izy (tsara na ratsy, marina na diso). Ary satria maro ihany koa ireo lahatsary mirongatra no noforonina tsy misy votoaty, momba ny famoahana ary fanazavazavana.
Na dia maro amin'ireo lahatsary navoaka aza no avy amin'ireo olo-tsotra, dia mandray anjara mavitrika amin'ny fanadiovana, fanitsiana, fametrahana dika an-tsoratra, ary fampiroboroboana ny votoaty ireo vondrona sy fikambanana samihafa. Maro amin'ireo vondrona no miasa toy ny fampahalalam-baovao antserasera, manao fanadihadiana sy miantoka ny fanomezana votoaty, ary manangona ireo lahatsary ho an'ireo karazana fampahalalam-baovao sy amin'ny media sosialy toy ny Facebook, Twitter, ary indrindra ny YouTube, ary ny habaka mpandefa vaovao na zava-misy mivantana toy ny Bambuser sy ny UStream. Anisan'ny fikambanana Syriana mpandefa lahatsary avy amin'ny olo-tsotra ny ANA New Media Channel sy ny Shaam News Network. Manaraka akaiky sy miandraikitra ny famoaham-baovao avy ao Syria i Syria Deeply, ary manao fanadihadiana lalina ihany koa. Manadihady ireo hetsika milamina tsy mba mivoaka amin'ny fampahalalam-baovao kosa i Syria Untold, izay mbola nanohy izany hatrany na dia eo aza ny fihanaky ny ady. Mamoaka fitantarana manokana mitohy avy amin'ny fampahalalam-baovao an'olo-tsotra Syriana kosa ny Global Voices. Mamokatra tsy ankiato amin'ny fanangonana fitaovana antsoina hoe Watching Syria's War (mijery ny ady ao Syria) kosa ny gazety New York Times.
Indreto ny tambatamba-dahatsary roa avy amin'ny fitantaran'olo-totra ao Syria, noezahana hosarahana sy hasongadina hampisehoana ireo endri-javatra maro amin'ireo raisina sary an-tsaina maro dia maro. Aranty ao amin'ny Corcoran Gallery of Art ireo lahatsary ireo, mifanindry sy mifaninana amin'ny fampiratiana War/Photography: Photographs of Armed Conflict and Its Aftermath (Ady/Saripika: Sarin'ireo ady mitam-piadiana sy ny voka-dratsiny) ihany koa, izay karakarain'ny Mozean'ny Zava-kanto ao Houston sy ao Washington hatramin'ny 29 Septambra 2013. Novoarina tamin'ny fiaraha-miasa amin'ny Global Voices sy ny Witness izy ireo.
Mampiseho ny antsipirihan'ny zava-misy mandritra ny fotoan'ny ady ny lahatsary voalohany, Light Weapons (Fitaovam-piadiana maivana): fisidinana angidim-by tsy ara-dalàna, fiara miady ao anatin'ny alina mangina, ary ny olona mandeha haingana eny an-dalana. Tsy ny fihetsiketsehana, famoretan'ny polisy, daroka baomba, sy ny horohoro isan'andro izay mamaritra ny fisian'ireo olona ao Syria isan'andro ihany no asehon'ny lahatsary, fa mampisongadina ny tranga, ny rivotra iainana: ny fahatsapana fisian'ady sy ny zava-marina mitranga ihany koa.
Mamoaka ireo fijoroana vavolombelona sy ny tafatafa kosa ny lahatsary faharoa mitondra loha lohateny hoe The Law of the Powerful Over the Weak (ny Lalàn'ny Matanjaka Manoloana ny Malemy). Mampiseho ireo fomba maro ataon'ny olona hahazoany ny fandehan'ny zavatra iainany ny rakitsary. Hitantsika ao ny fitantarana, ny famerenam-pitantarana, ny fomba fahazoan-kevitra ary ny fanotaniana maro. Ohatra amin'izany: Ankizy iray mitantara ny fahasimban'ny tànanany; lehilahy mitsiky somary sorena mamariparitra ny fomba fampihorohoroan'ny basy ny fiarahamoniny; lehilahy iray mitomany ny fahafatesan'ny rahalahiny mpakasary. Ahafahantsika mahafantatra tsara ny ady amin'ny alalan'ny fitantaran'ny tsirairay ireo fa tsy avy amin'ny fiteny manidin'ny mpandinika politika ara-jeografia na tombotsoam-pirenena. Mampahatsiahy antsika izy ireo fa loza goavana indrindra ho an'ireo olona sy fianakaviana an'hetsiny izany ady izany, santionany amin'ireo hafa marobe ireo tantara vitsy ampahafantarina eto.
[…] tantaran'ny fahafatesana 2 Jul Fitaovam-piadiana Maivana: Sary Mampihetsi-Po Avy Ao Syria 13 Jun Syria: 18 Journalists Killed in January 13 Jun Syria: Criticizing Arab Silence 22 May […]